February 23, 2020 - MM Live News
Uganda International Series 2020 ပွိုငျပှဲမှာ သကျထားသူဇာ ဗိုလျစှဲခဲ့ပါပွီ…
Uganda International Series 2020 ပြိုင်ပွဲမှာ ဗိုလ်စွဲခဲ့ပါပြီရှင့်။🤩🤩 ချန်ပီယံဆုကို ကာကွယ်ပြီး နှစ်နှစ်ဆက် ပထမဆုရယူနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် အရမ်းပျော်နေပါတယ်ရှင့်။ အားပေးနေကြတဲ့သူတွေအားလုံးကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ Olympic ဝင်ခွင့်ရရေးအတွက် အစွမ်းကုန်ဆက်လက်ကြိုးစားသွားပါမယ်။ 27.22020 ကနေ 01. 03. 2020 အထိ ကျင်းပမဲ့ Kenya International Future Series 2020 အတွက် မနက်ဖြန် Kenya နိုင်ငံကို သွားပါမယ်ရှင့်…..။THET HTAR Thuzar #thtz #UgandaInternationalSeries #Champion ၂၀၂၀ ယူဂန်ဒါနိုင်ငံတကာစီးရီးကြက်တောင်ပြိုင်ပွဲ အမျိုးသမီးတစ်ဦးချင်းပွဲစဉ် ဗိုလ်လုပွဲမှာ ကမ္ဘာ့အဆင့်(၆၁)ရှိ မြန်မာကြက်တောင်ရိုက်မယ် သက်ထားသူဇာက ကမ္ဘာ့အဆင့်(၁၂၃)ရှိ အိန္ဒိယနိုင်ငံသူ Aakarshi Kashyap ကို (၂၁-၁၄) (၁၆-၂၁) […]
မယားရှိ… ယောက်င်္ကျားတွေလင်ရှိတဲ့ …မယားတွေအသေချာ ဖတ်ကြည့်သွားကြပါ လင်ရှိတဲ့ မယားတွေမယားရှိတဲ့ဖွန်ရူးတွေ သေချာဖတ်ပါဒူးနဲ့မျက်ရည်သုတ်ရတဲ့ဘဝမရောက်ခင်ပြင်သင့်တာကိုပြင်ပါ သက္ခာ အကြောက်တရား မရှိရင်ဆက်လုပ်ချင်ရာလုပ်ကြပါသူတော်စဉ်ယောင်ယောင် လူကြီးလူကောင်ယောင်ယောင်နဲ့ကြောင် သူတော်ကြွက် သခိုးမလုပ်ကြပါနဲ့ Online သုံးပြီး အရွံဆုံးကလင်ရှာမယားရှာလင်ရူးဖွန်ရူး တွေပဲအိမ်ကညီမ အမ နဲ့ဇနီမယားကို လူများတွေကြည့်မှာကိုကြောက်တဲ့လူသဝန်တိုတတ်တဲ့လူလူများသားမယားကိုကြတော့ဘာလို့အချောင်နှိက်ချင်နေကြတာလဲ …? တိုက်ဆိုင်လို့ စိတ်ဆိုးရင် တစ်ခါတည်းBlock သွားပါ အမှန်တရားက အမှန်တရားပါပဲ…. “အိမ်ထောင်ရှင်နှင့်” On Line ” အန္တရာယ်” ခေတ် ကာလ ပြောင်းလာသည်နှင့်အမျှ(ပြစ်မူ့)ကျူးလွန်မှု့များသည် ပို၍ပို၍ လွယ်ကူလှသည်။ ရှေးယခင်ချစ်သူရည်းစားထားဖို့ခက်ခဲကောင်း.ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်ယခုခေတ် ကာလတွင် ” Online Chatting”ပြုခြင်းစသည်များပေါများလာသည်။ဖုံးနှင့်လက်ညိုးထိရုံဖြင့် ရည်းစားဖြစ်သွားကြသည်။ အိမ်တွင်းပုန်းများသိက္ခာရှင်အမျိုးသမီးများယောက်ျားတယောက်နှင့်ပြင်ပ၌စကားပြောဖို့ကြောက်ရွံ့သူများပင် အမျိုးသားများစွာဖြင့်” chat box” မှာ သာယာနေကြသည်။ ” Facebook,Bee-Talk,WeChat “စသည့်နေရာများ၌ အပျိုအအို အိမ်ထောင်သည်လူငယ်လူကြီးများစွာဖြင့်ပြည့်နှက်နေကြသည်။ […]
ရှေးဟောငျး ကားငယျလေးမြားဖွငျ့ ကမ်ဘာပတျခရီးသညျမြား မွနျမာပွညျသို့ ရောကျရှိနေ
ရှေးဟောင်း ကားငယ်လေးများဖြင့် ကမ္ဘာပတ်ခရီးသည်များ မြန်မာပြည်သို့ ရောက်ရှိနေ ရန်ကုန် ၊ ဖေဖော်ဝါရီ , ၂၃ ကမ္ဘာပတ်ခရီးသည်များ နေပြည်သို့သွားရန် မင်္ဂလာဒုံလမ်း စစ်သင်္ချိုင်း အနီးအရောက် ၎င်းတို့စီးနင်းမောင်းနှင်လာသည့် ချစ်စရာကားငယ်လေးများ(ရှေးဟောင်းကားငယ်)နှင့်အတူ …. ခေတ္တတန်းစီပြီးနောက် ဆက်လက်ထွက်ခါနေသည်ကိုဖေဖော်ဝါရီ( ၂၃)ရက်က နံနက်၉နာရီ ၂၀မိနစ်ကမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ “နေပြည်တော်အမြန်လမ်းပေါ်ပို့ပေးရမှာ” ဟုလမ်းကြောင်းရှင်းပေးသည့်ဆိုင်ကယ်စီးယာဉ်ထိန်းရဲတစ်ဦးကပြောသည်။ တိုးရစ်တစ်ဦးကိုမေးမြနိးကြည့်ရာ နေပြည်တော်သို့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဖြေကြားသည်။ရွေမြင့်ဦး unicode ရှေးဟောငျး ကားငယျလေးမြားဖွငျ့ ကမ်ဘာပတျခရီးသညျမြား မွနျမာပွညျသို့ ရောကျရှိနေ ရနျကုနျ ၊ ဖဖေျောဝါရီ , ၂၃ ကမ်ဘာပတျခရီးသညျမြား နပွေညျသို့သှားရနျ မင်ျဂလာဒုံလမျး စဈသင်ျခြိုငျး အနီးအရောကျ ၎င်းငျးတို့စီးနငျးမောငျးနှငျလာသညျ့ ခဈြစရာကားငယျလေးမြား(ရှေးဟောငျးကားငယျ)နှငျ့အတူ …. ခတ်ေတတနျးစီပွီးနောကျ ဆကျလကျထှကျခါနသေညျကိုဖဖေျောဝါရီ( ၂၃)ရကျက နံနကျ၉နာရီ ၂၀မိနဈကမွငျတှခေဲ့ရသညျ။ “နပွေညျတျောအမွနျလမျးပျေါပို့ပေးရမှာ” ဟုလမျးကွောငျးရှငျးပေးသညျ့ဆိုငျကယျစီးယာဉျထိနျးရဲတဈဦးကပွောသညျ။ တိုးရဈတဈဦးကိုမေးမွနိးကွညျ့ရာ နပွေညျတျောသို့သှားမညျဖွဈကွောငျးဖွကွေားသညျ။ရှမွေငျ့ဦး
ကံဆိုးမိုးမှောငျကလြာတဲ့ အခြိနျမှာ ဒီလို ကာကှယျလို့ရပါတယျ
ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျလာတဲ့ အချိန်မှာ ဒီလို ကာကွယ်လို့ရပါတယ် လောကမှာ ကံမကောင်းဘူးဆို ရင် ကံကောင်းအောင်က ဘာလုပ် ရမှာလဲ၊ မကောင်း တဲ့ကံတွေ ပပျောက်ေ အာင် ကံကောင်းတဲ့ နည်းတွေ မရှိဘူးလားဆို၊ ရှိတယ်။ အကုသိုလ်အကျိုးတွေ ဝင်ရောက်ဖြစ်ပေါ်ေ နတာကို လူတွေက ကံမကောင်း ဘူးလို့ပြောတာ။ အကုသိုလ်ရဲ့ အကျိုးတရားတွေက ကိုယ့် သန္တာန်ရောက်ပြီ၊ ထိ ခိုက်နေပြီဆိုရင် ဒါက ကံမကောင်း ဘူးလို့ ပြောကြတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရပ်ကို ပြန်ဆန်းစစ် ကြည့်ရမယ်။ ငါတို့လုပ်နေတာ အမှားမရှိဘူး၊ အကောင်းတွေ လုပ်တယ်။ သို့သော် အတိတ် တုန်းက မှားယွင်း မှုတွေ ကလည်း လူတွေရဲ့သန္တာန် လာရောက်ပြီး အကျိုးပေးနေတာတွေ ရှိတတ်တယ်ပေါ့။ အဲဒီလို ဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးတွေေ ကာ […]
ဆွမ်းတော် ကပ်ရာတွင် သတိမထားလိုက်မိတဲ့ အလွဲလေးများ ဘုရားဆွမ်းတော်ကပ်ရာတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာအများရဲ့ အလွဲတွေထဲက နောက်ထပ်အလွဲတစ်ခုက ဘုရားဆွမ်းတော် ကပ်တာလေးပါ။ ဆွမ်းတော်ကပ်လှူတာကို ပြောတာပါ။ နတ်တင်သလိုမျိုး ဘုရားဆွမ်းတော်တင်တာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဆွမ်းတော်ကပ်တာ ဆိုတဲ့အတွက် သက်ရှိထင်ရှား ဘုရားရှင်ကို ရည်ရွယ်အာရုံပြုပြီး ကပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘုရားက ဘာမှ မပြောဘူးဆိုပြီး ဖြစ်သလိုလေး တင်သွားတာမျိုးတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အချို့ရဲ့ အိမ်မှာဘုရားဆွမ်းတော် ကပ်တာလေးတွေ တွေ့ဖူးပါတယ်။ ထမင်းပန်းကန်လေးပေါ်မှာ သကြားလေးဖြူ၊ ထန်းလျှက်လေးနဲ့ တင်ထားတာကိုပါ။ အိမ်မှာ စားစရာမရှိလို့၊ သူတို့ကိုယ်တိုင် ဒီသကြား၊ ထန်းလျှက်တွေနဲ့ စားနေရလို့ဆိုရင်တော့ အထူးပြောစရာ မရှိပါဘူး။ ကိုိယ်စားနိုင်တာ၊ ကိုယ်ရှိတာလေးနဲ့ ကိုယ်နဲ့ထပ်တူထားပြီး ဘုရားရှင်ကိုလည်း မရှိရှိတာ ကပ်တဲ့သဘောပါ။ ခုဟာက အဲလိုမဟုတ်ပါဘူး။ မကပ်နိုင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်စားတဲ့အခါ […]